ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု | ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု
October 26, 2012 | Hits:7,358
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတွေ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် လူဦးရေ ရာဂဏန်းအထိ သေဆုံးမှုများရှိလာပြီး ကလေးငယ်များအပါအဝင် ဒဏ်ရာရသူများ၊ နေရပ်သေဒ စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများ၊ နေအိမ်၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုများ မြင့်တက်လာနေပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကတော့ အစိုးရနဲ့ အာဏာပိုင်များရဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု ပိုမို ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကြေညာချက်တွေ အသီးသီး ထုတ်ပြန်လိုက်ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ဒီပဋိပက္ခတွေမှာ အစိုးရစစ်တပ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာရင် နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် ပြောဆိုကြမှာစိုးတယ်ဆိုပြီး အစောပိုင်းက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတရုံးကတော့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်မတော်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူများရဲ့ ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်မယ်၊ ပဋိပက္ခတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီက လွှတ်တော်မှာ အရေးအပေါ်အဆို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ တကြော့ပြန် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများပေါ် ကိုင်တွယ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပါဝင်ရမယ့် တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီ ဧရာဝတီဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
46 Responses to “ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု”
ဒီကိစ္စဟာ သာမန်ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အာဏာရှိသူတွေ ငွေရှိသူတွေ မဖြစ်မနေ ပါဝင်နေမှာပါ။ ဒီကိစ္စကို တာဝန်ရှိသူတွေ အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းပေးကြပါ။
ဒီကိစ္စက အရေတကြီးနဲ့ သေချာဆုံးဖြတ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ.. ကျနော်က ဘာသာရေးအစွဲမရှိပါဘူး… ငယ်တုန်းက ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်း မွတ်ဆလင်တွေလည်း ပါပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံက အဖြစ်အပျက်တွေမြင်ပြီး နောက်ပိုင်း ရင်မောမိတာအမှန်ပဲ… လောလောဆယ် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ထိုင်းမှ ဖြစ်နေတာကြည့်ရင်သိသာပါတယ်.. နောက်ပြီး အရင်က ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါမယ်… ဘာသာရေးစွဲလမ်းမှုမရှိပါဘူး. ဒါပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘာသာရေးကိုသာ လိုလားပါတယ်…
ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတရပ်ဖြစ်အောင် သက်ဆိုင်ရာက ဖိဖိစည်းစည်းလုပ်သင့်တယ်။ အခုအတိုင်းပဲ ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်၊ အမိန့်ပေးလိုက်လုပ်နေပြီး တကယ်တမ်းဘာမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဘယ်ဒေသဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်တော့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး……
ဘာသာရေးအစွဲနဲ.ဘာမှ မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ အပေါ်မှာရေးသလို ငယ်ငယ် ထဲက ပေါင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့နှစ်ဖက် စလုံးအတွက် မျက်နှာပူ နေရတယ်။ ဒါမျိုးထပ် မဖြစ်အောင် ဖန်တီးသူတွေ ကိုဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရပါမယ်။လူမျိုးနှစ်မျိုးကြား မှာ ဘာသာရေးကိုရှေတန်း မတင်တာကောင်းတယ်။ ဘာသာတိုင်က လူတွေကိုကောင်းတဲ့ အလုပ် လုပ်ဖို.ပြောထား ပါတယ်၊ ဘယ်ဘာသာမှ အရက်သေစားသောက်သုံးဖို. သူများအသက်သတ်ဖို. သူများကို မတရားအနိုင်ကျင့်ဖို.ပြောထားတာမရှိပါဘူး လူသားတွေ ကိုကောင်းတဲ့ အကြောင်းဘဲ လမ်းညွန် ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိယုံကြည်ရာ ယုံကြည်ရာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပြီး ဘယ်သူ ဘယ်သူကိုမှ မစော်ကားဘဲ ချစ်ချစ် ခင်ခင်နေသွားဘို.လိုပါတယ်။ သေတဲ့ လူလည်းသေ သွားကြ ပြီးကျန်တဲ့လူတွေနောက် ထပ်ခိုက်ရန်မဖြစ်ပွားဘဲနေ သွားစေခြင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် တောင်းပန်ခြင်းတာက comment ရေးတယ်အခါ ဆဲဆိုးပြီး မရေးဘို.ပါ ဒီလိုဆဲဆိုးနေရင် တယောက်နှင့် တယောက်ဆွေးနွေးတာလိုရင်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလား နယ်စပ်မှာလဲ အပြည့်ချထားသင်ပါတယ်
မဖြစ်သင့်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ တပ်တွေ အလံးအရင်းသွားချထားတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော နိုင်နင်းအောင် ကိုင်တွယ်ရမယ်
နောက်မဟုတ်ရင် ထိုင်းတောင်ပိုင်းလို ဘုန်းကြီး ဆွမ်းခံ ကြွတာ စစ်သားသေနပ်နဲ့ လိုက်နေရမယ်။
ပြီးတော့ အိမ်တွေ မီးရှီု့နေတာ ရပ်အောင် အမြန်ဆုံးကိုင်တွယ်ရမယ်
လူတွေ က အိမ်တလုံးဆောက်နိုင်ဖို့ အတော်ကြိုးစားကြရတာ။ လွယ်လွယ်နဲ့ မီးရှို့ခံရတာ ဘယ်သူ ပြန်လျှော်မှာလဲ
ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကုလားဖြစ်ဖြစ် ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်။
ဥပဒေရှိပြီး မကျင့်သုံးတာ တကယ်အားမရစရာပါ။
ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်အရေးပေါ်ပေါက်လာတာ…. အစိုးရကိုင်တွယ်မှုညံ့ဖြင်းတာရယ်။ အိုအိုင်စီကို
နိုင်ငံတော်သမတကြီးက မိတ်ဆက်လိုက်တာရယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… ပထမအကြိမ် ရခိုင်အ
ဒါကိုသမတကြီးက…. အိုအိုင်စီကိုလက်ခံပြီးရုံးဖွင့်မယ်လို့…. လုပ်လိုက်ရော…
စခန်းကထလာတော့တာပဲ့… ဒုတိယအကြိမ်ရခိုင်မှာလူတွေသေတာ… အိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာဟာ နိုင်ငံတော်သမတကြီးနဲ့ ဒါရိုက်သက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်….. ကုလားတွေကလည်း သမတကြီးစကားကိုယုံစားထားပုံရတယ်.. အိုအိုင်စီရုံးသာဖွင့်ခွင့်မြန်မာပြည်ထဲမှာ တကယ်သာရမယ်ဆိုရင်..ကြိုးဆွဲချင်ရာဆွဲ.. ကကြိုးဖေါ်လို့ရပြီလို့… သူတို့ထင်ထားပုံရတယ်…ဒါကြောင့်.. ရခိုင်မှာကုလားတွေကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေပေးဖို့. .နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်တာကို… သမတရုံးကသိနေတယ်။
အိုအိုင်စီကိုတနိုင်ငံလုံ… လူတွေရော..ရဟန်းသံဃာတော်တွေကပါ… မလိုဘူးဆိုတာကိုနောက်မှ… သမတရုံးကသိလာရတယ်…. ဒါဆိုဟိုဘက်ကိုပြန်ကြားထားတဲ့စကားကလည်းလွန်နေ
အိုအိုင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း.. နိုင်ငံတော်သမတကြီးကို ရုံးဖွင့်ခွင့်ရဖို့အရေးအားကိုးရှာတယ်… နိုင်ငံခြားသတင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တခုမှာ.. အိုအိုင်စီအကြီးအကဲတယောက်ကိုသ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ.. အိုအိုင်စီအလိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေ ဆန်ဒပြနေတယ် အိုအိုင်စီရုံးဖွင့်ခွင့် ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုသဘောရသလည်းလို့မေးတော့…
ဒါကအစိုးရအာဘော်မဟုတ်ဘူးဗျ.. .ပြည်သူတွေရဲ့အာဘော်သာဖြစ်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရက.. ရုံးဖွင့်ဖို့ကိတ်စဘာမှလည်း.. .ပြင်တာပြုတာတွေမလာသေးဘူး.. လို့ဖြေကြားသွားတာကို ထောက်ရှုခြင်းဖြစ်… အိုအိုင်စီဘက်ကလည်းအားကိုးထားတာ ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ သိသာလှတယ်…..
နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ထဲမှာ…ဆန်ဒပြတာတွေ မှိုလိုပေါက်လာတော့မှ… အပြောင်းအလည်းတွေနဲ့..ဘလောင်းဘလဲ… အိုအိုင်စီရုံးမဖွင့်ဘူးလို့ ထကြေညာလိုက်ရော…………..
ကုလားတွေပေါက်ကွဲတော့တာပဲ့…. အရငိတုန်းကညိမ်နေတဲ့ အနောက်တံခါးကကုလားတွေ
ကိုလက်သံပြောင်ချခိုင်းတယ်…. အစိုးရကြောညာချက်ထွက်ပြီး တရက်နှစ်ရက်ပဲ့ကြာတယ်. ရခိုင်မှာထချကြတော့တာပဲ့…..။
ကုလာတွေကဒီလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်ဘူး…. ရန်ကုန်မှာလည်းဆန်ဒတွေပြဖို့… စည်းရုံးလှုပ်
ရှားလာတယ်.. အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပျက်အောင် လုပ်ဖို့အကွက်တွေဆင်လာတယ်… မငြိမ်းချမ်းလို့အစ်နေ့မလုပ်နဲ့လို့ ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြကာ… အခွင့်အရေးတွေယူလာတယ်…
ဒါကိုအားလုံးအမြင်.. အားလုံးအသိပဲ့ဖြစ်ပါတယ်…. ရခိုင်မှာလည်းလူတွေသေတယ်..ကုလားသေတာ.. မရှိသလောက်ပဲ့… သတင်းတွေထဲမှာတော့ ကုလားသေတယ်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့တယ်… ဒါပေမဲ့..မီဒီယာတွေကဖေါ်ပြတဲ့.. သတင်းဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတော့..မြန်မာ(ရခိုင်)တွေ တုံးလုံးပက်လက် သေနေတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပဲ့မြင်ရတယ်…
ရခိုင်ကိတ်စကို ချက်ချင်းလက်ငင်းမရှင်းပေးနိုင်ဘူး… ဒါကိုသံဃာတော်တွေမကြေနပ်လို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို မနေ့ကဆက်လက်တိုက်တွန်းနေတယ်… ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတော့ အခုထိဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ..တိုင်းပြည်ကိုမတင်ပြဘူး…။
အိုအိုင်စီ(ပြည်ပတွေ)ကလည်း ဘယ်လိုလှုပ်ရှားလာမယ်ဆိုတာကို မသိသေးဘူး… .ပြည်တွင်းမှာဖွင့်ခွင့်မရရင်… အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုမှာဖွင့်ပြီး.. .ပြည်တွင်းမှာသူတို့လိုသလို လှုပ်ရှားဖို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို တိုက်တွန်းမယ်လို့.. ရန်ကုန်ကုလားအသိုင်းအ၀ိုင်းက သတင်းတွေထွက်လာပြန်နေပါတယ်.. .ပြည်သူတွေနဲ့သံဃာတော်တွေ… ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာကတော့ မသိသေးပါဘူး…………….
အိုအိုင်စီကိတ်စကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်အရေးထပ်ဖြစ်တာ.. သမတကြီးတာဝန်လည်းမကင်းဘူး… အစကတည်းကငြိမ်နေလိုက်ရင် အကောင်းသားအိုအိုင်စီလုပ်မှ အခုပိုဆိုးနေပီ.။
နောက်ဘာတွေ ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်းကြိုမပြောနိုင်သေးဘူး.. အခုသတင်း
In reality, ifagovernment intends to do/make any job/decision, they must explore and predict (1) what benefits their country could get by that job/decision, (2) what consequences they could encounter after they have done, (3) what is the result of outweighing between risks and benefits…..
Ifacountry is facing withaproblem, the government should ask for any suggestion from the experts in that field not only from inside but also from outside the country. They don’t need to use all suggestions. The advice which will give benefit to own country should be accepted and used.
ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေပါနေတယ်….အစိုးရ အနေနဲ့ နှစ်ဘက်ကျေနပ်အောင်၊ အရင်လို ယှဉ်တွဲနေလို့ရအောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမှာပါ. .ပြည်သူလူထုအများစု အနေနဲ့ စားဝတ်နေရေး အတွက်အလျဉ်မီအောင် ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့အထဲ လူမျိုးခြားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေထဲကို မရှောင်သာရောပါရမယ်ဆို၇င်တော့ ဒီနိုင်ငံက ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကတော့ …..
တောဝက်၂ကောင် တောထဲမှာ အစွယ်နဲ့ပက်ရင်း ၂ကောင်စလုံးမော ပြီး လဲသွားကြရော ငှက်လင်းတက လာသုတ်ပြီး ၂ကောင်စလုံးကို မိန်ရှက်စွာ စားသောက်လိုက်လေသတည်း။ ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါ ပဲကွယ်။
စစ်တပ် မပါပဲ ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လူဆိုဒါ သွေးပူ ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် စစ်တပ် နဲ့တောင် ထိန်းလို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ စစ်တပ် မပါဘဲ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ပို ပို ဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အချိန်ကျမှ စစ်တပ်ဝင် တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် မူဆလင် ဘာသာ ကို အဓိက ကိုးကွယ်သော နိုင်ငံများရဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိုးနက် တိုက်ခိုက်မှု ကို ပိုမို ရင်ဆိုင်လာနိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ် အမြန်ဆုံး ၀င်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးကို မျှမျှတတ ဆက်ဆံ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်ကို နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကျွမ်းကျင်သော သူ တစ်ယောက်က အဓိက ဦးစီးဦးဆောင် ပြုပြီး ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းစေလိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ပြေငြိမ်းသွားဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဗမာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
ပြဿနာတွေ ပြေလည်ဖို့ ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တခြား ဖိတ်သင့်ဖိတ်ထိုက်တဲ့ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး သူတို့တွေ ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းရပါ့မယ်။ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ တင်ပြလာတဲ့အတိုင်းကို အစိုးရက တိတိကျကျ အကောင်အထည်ဖော်ပေးရပါ့မယ်။ ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရတာကို ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ရမှာ ဖြစ်သလို အချိန်ယူပြီး လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလဲ သိပ်ပြီး အချိန်ဆွဲလွန်းတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ အစွမ်းကုန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အခု ဖြစ်နေတာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးက ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနေပါလျက် အစိုးရက အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ပြောနေတာဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို လုံးဝကို အသိအမှတ် မပြုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပြဿနာက ဘယ်တော့မှ ပြေလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်ပြီး စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ ခဏလောက်ငြိမ်နေတာမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်။ မေလ ဂျွန်လမှာ ပြဿနာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တင်ပြထားတဲ့ စာတန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီစာတန်းတွေထဲမှာလဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က တောင်းဆိုထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကို လုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဘက်က ဒီနေ့အထိ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်ပေးတာ မတွေ့ရသေးဘူး။ သမ္မတကြီးနဲ့ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့တုန်းကလဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က သူတို့ဆန္ဒတွေကို တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတကြီးဘက်က နှုတ်ကတိတောင် မပေးနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟာ အဲဒီပြည်နယ်မှာ ရှိနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒအပေါ်မှာဘဲ တည်ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒတစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက်ရပါ့မယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့လူတွေ ပြည်ပက အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဖိအားတွေကို ဘာမှ အာရုံစိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒီဟာတွေအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာတာတွေကို လုပ်နေသမျှတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မကြာခဏ မီးထတောက်နေမှာပါဘဲ။ ဘယ်လိုမှလဲ ဖြေရှင်းလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အစိုးရရော ဒီချုပ်ရော ၈၈-အုပ်စုတွေရော ရေလိုက်လွဲနေကြတယ်လို့ မြင်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်။ ကြာလာရင် တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က အမြင်စောင်းသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါ အန္တရာယ်ပဲ။ တကယ့်ကြောက်စရာပဲ။ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ အပြင်ကဟာတွေက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်း ညီညွတ်နေရင် ဘာမှ ကြောက်စရာမလိုဘူး။ ဂရုစိုက်စရာကို မလိုဘူး။ ဒီပြဿနာကို ပြေလည်စေချင်ရင် ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်လို့ မရဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ တခြားနည်း မရှိဘူး။ တခြားနည်းနဲ့ ခြံစည်းရိုးခွထိုင်ပြီး ရှင်းလို့ကတော့ ရခိုင်က မီးက တစ်ပြည်လုံးကို ကူးစက်သွားဖို့ပဲ ရှိတယ်။
အခုကိစ္စမာ အာဏာပိုင်များအနေနဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမာ ဆူပူအောင် လှုံဆော်သူများကို လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲ ထိရောက်စွာအရေးယူသင့်တယ်. .ပြည်တွင်းမိဒီယာသတင်းမာ ရခိုင်တွေ ဒဏ်၇ာရတဲ့ပုံပဲတွေရပြီး, မွတ်ဆလင်တွေဒဏ်၇ာရတဲ့ပုံ, လှေနဲ့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတဲ့ပုံ တင်တာတွေလည်းမတွေ့ရဘူး, .ပြည်တွင်းမိဒီယာများကလည်း အမျုိးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ တဖက်သက်တင်ပြမှုတွေကိုရပ်သင့်ပြီး ,နှစ်ဖက်စလုံးလူမိူးဘာသာမခွဲပဲ ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပညာပေးဆောင်းပါးတွေကို အကြံပြုရေးသင့်ပါတယ်
ဟိုလို လုပ်ပါလား … ဒီလို လုပ်ပါလား … ငါ လဲ မလုပ်တတ်ဖူး …
တပ်မတော်သာလျှင် အမိ တပ်မတော်သာလျှင် အဖ .. ဒါ့ကြောင့် လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးကို တပ်မတော်ကြီးလက်ထဲသာ အပ်လိုက်ပါတော့ ..
The most responsible person in this case is the government . They have not done anything effectively even at the times they could control the condition well. The biggest problem is they have no discipline whenever they face with any issue or whenever they do any job. They have no idea how to prevent further attack and suffering and no planning how to tackle in case there is another issue appeared. Otherwise, they have no stress or worry for this issue and so there is no preparation. I suggest there should be many intelligent and well-skilled persons in the government group who are wise enough to see the foreseeable future.
အစိုးရရော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရော ရခိုင်က ပြဿနာကို ပြေလည်စေချင်တဲ့ စိတ်တော့ အမှန်တကယ် ရှိမှာပါ။ ဒါဟာ သံသယ ရှိစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာ ပြေလည်စေချင်ရင် ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်း မှန်ဖို့တော့ လိုတယ်။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ယေဘုယျသဘောအရ ဒိုင်လူကြီးနေရာက နေပြီး ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခု ရခိုင်ကိစ္စမှာတော့ သဘောသဘာဝအရ ဒိုင်လူကြီး နေရာကနေပြီး ဖြေရှင်းရင် ဘယ်လိုမှ ပြေလည်စရာ မမြင်ဘူး။
ဥပမာအနေနဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ ကရင်ဗမာ အဓိကရုဏ်းတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဒါကို ကရင်လဲ တိုင်းရင်းသား ဗမာလဲ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒိုင်လူကြီးနေရာက နေပြီး ဖြေရှင်းတာ မှန်တယ်။ ဟိုတုန်းက ကရင်နဲ့ ဗမာ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ဘယ်လောက်ပဲ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြ၊ အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကြားမှာ ကရင်ကရော ဗမာကရော ငါတို့ဟာ ညီအကိုမောင်နှစ်မတွေဆိုတာ ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံထားကြတယ်။
အခု ရခိုင်က အနေအထားက အဲဒီလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တဖက်က တိုင်းရင်းသား၊ အခြားတစ်ဖက်က တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြားအာဏာကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ လူအုပ်စု၊ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားလဲ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကို နှစ်ဖက်သင့်မြတ်အောင် Peacefull co-existence ဖြစ်အောင် လုပ်ယူမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားဘက်က ကိုယ့်နဲ့ ဓလေ့စရိုက်ချင်း ဘာသာအယူဝါဒချင်း မတူတဲ့အပြင် ကိုယ့်နယ်မြေကိုတောင် အဓမ္မသိမ်းပိုက်ဖို့ လုပ်နေသူတွေနဲ့ Peacefull co-existence ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို အတင်းလက်ခံခိုင်းမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ Mindset ကို ပြောင်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကို မိုက်မဲရာ ကျမယ်။
ယနေ့အနေအထားမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ မပြောနဲ့။ ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်တောင် သူ့အိမ်နားကို ဟိန္ဒူ လာလာ၊ ခရစ်ယာန် လာလာ။ လာခဲ့ ရတယ်။ ဘာမှ မတုန်လှုပ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဟာတစ်မျိုး ရောက်လာမှာကိုတော့ အလွန်ကို စိုးရိမ်နေတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာ။ မယုံရင် စစ်တမ်းကောက်ကြည့်လို့ ရတယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့ mindset ကို ပြင်ခိုင်းမလား။ သူတို့ mindset ကလဲ အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာက မွေးဖွားပေးလိုက်တာ ဆိုတော့ မှားတယ် လို့ ပြောဖို့ မလွယ်ဘူး။
ပြောချင်တာက ရခိုင်ပြဿနာကို အစိုးရက ကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ ဒိုင်လူကြီးလုပ်ပြီး လူအုပ်စုနှစ်စုကြား peacefull coexistence မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ခိုင်းတဲ့နည်းကို သုံးနေလို့ကတော့ ပြဿနာက မပြေလည်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုပိုဆိုးသွားဖို့ပဲ ရှိတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတို့ ဘာတို့ နိုင်ငံတကာကြိုက် အပြောအလုပ်တွေကို လုံးဝ မေ့ထားလိုက်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအကြိုက်ကို အားစိုက်ပြီး တစ်ဟုန်းထိုး လုပ်ဆောင်မှသာ ဒီပြဿနာ ပြေလည်သွားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်အိမ်အရေး ကိုယ့်မိသားစုအရေးကို မိသားစုဝင်တိုင်းက လွတ်လပ်စွာတွေးနိုင်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲ ခွေးတိုးပေါက်က ၀င်လာပြီး အိမ်ထဲက လူတွေ အိပ်ရေးပျက်အောင် ဟောင်နေတဲ့ ခွေးဟောင်သံကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး။
maung ti tart
ကျတော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ စစ်တပ်ဝင်မပါသင့်ပါဘူး နိုင်ငံတကာဖိအားတွေတိုးလာနိုင်ပါတယ်
ပြီးတော့ ရခိုင်တွေနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို တစ်နေရာစီ နေရာသတ်မှတ်ပေးလို့မရပါဘူး
အဲဒီလိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင် အချိန်တန်ရင် ဘင်္ဂလီတွေက သူ့တို့ကို သတ်မှတ်
ပေးတဲ့ နေရာကို နောက် အနှစ် ၁၀၀ လောက်ကြာလာရင် သူတို့ ပိုင်တဲ့ နေရာအဖြစ်ကြေငြာပြီး လွတ်လပ်သော မွတ်စလင်နိုင်ငံ အဖြစ် ခွဲ ထွက်ဖို့ တောင်းဆိုလာနိုင်ပါတယ်။
အန္ဒိယ ပါကစ်စတန် ၊ ထိုင်း တောင်ပိုင်း ၊ ဖိလစ်ပိုင် ကျွန်း ၊ သီရိလက်ာ တမီးလ် သူပုန် ကိစ္စ တို့ကိုကြည့်ပါ။ ဥပမာ တွေပါ .. အဲလိုမျိုးတော့ အဖြစ်မခံနိုင်ပါ ။
အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ အကြံပေးရမယ်ဆိုရင် ရခိုင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ နဲ့ ညှိနိုင်းပါ ။ ပြည်သူ့ စစ်အသွင်နဲ့ ရခိုင် ကိစ္စကို ငြိမ်းသွားအောင် ဖိလုပ်ပါ စစ်တပ်က ဒိုင်လူကြီးနေရာကပဲနေပါ။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာ အလည်မှာ စစ်တပ်နာမည် မပျက်ပါ။ ပြည်သူ့ စစ်တွေက ရခိုင် လူမျိုးတွေဘက်က ရပ်တည်ပြီး ကိုယ့် လူမျိုး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေမနာအောင် ကာကွယ်ပါ
ထိုးစစ်ဆင်ရန်မလိုပါ ။ ကာကွယ် ဖို့တော့ လက်နက်ပါတပ်ဆင်ပြီး ကာကွယ်ပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ အစိုးရကမီဒီယာတွေနဲ့ပြေလည်အောင်ညှိပြီးရခိုင် ကိစ္စကို ဒိုင်နေရာကသာ နေပြီး ထိန်းသိန်းနေကြောင်းပြပါ။ နောက်ငြိမ်းချမ်းသွားတော့မှာ ဘင်္ဂလီတွေ နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာက ရခိုင်တွေအကုန်လုံးကို စစ်သင်တန်းပေးပါ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ပေးပါ စစ်တပ်က တိုက်
ရိုက်ကွပ်ကဲ။ နောက်ပိုင်းကျမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဘင်္ဂလီတွေကို အလိမ္မာနည်းနည်း နဲ့ မောင်းထုတ်ပြစ်ပါ။
In Sri Lanka,is different. Sinhalese (Buddhist) Majority killed many thousand of Tamil (Hindu),so, the issue is totally different. But,what I have known is Lord Buddha teaches us,not even to eat the meat of animals,vegetarian is good, but, nowadays, Why, These Buddhist killed many other races and shout for political reason, or invading purpose or to protect the territory, are so called False words that used in way of terrorism.
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသိစေရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်နေ့ စဉ်သတင်းတွေဖက် စာစောင်တွေကြည် အင်တာနက်
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ ထိုင်းတို့ မလေးတို့ကို ခိုးဝင်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ဟာ ထိုင်း/မလေး နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့အတွက် ထိုင်း/မလေးအစိုးရက နယ်မြေသီးသန့် ပေးရမယ်လို့ ပြောသံဆိုသံ မကြားရပါလား။ ဒီလိုများ ပြောလာလို့ကတော့ ထိုင်း/မလေး အစိုးရက အမှုန့်တောင် ကြိတ်ပစ်လိုက်မယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေလို့ ထိုင်း/မလေးကို ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဧည့်သည် လို့ပဲ သဘောထားတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပလိတိချောက်ချက်တွေ သမိုင်းလိမ်တာတွေ လုံးဝ မလုပ်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကတော့ ဘယ်လို အကြံအစည်နဲ့ ဘယ်လို လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးအသိပဲ။ ဒါကြောင့် ထိုင်း/မလေးကို ခိုးဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ တခြားစီပါ။ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒီနှစ်ခုကို နှိုင်းပြီး မပြောသင့်ဘူး။
Question for ko MinTharMon.
“((ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ ထိုင်းတို့ မလေးတို့ကို ခိုးဝင်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ဟာ ထိုင်း/မလေး နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့အတွက် ထိုင်း/မလေးအစိုးရက နယ်မြေသီးသန့် ပေးရမယ်လို့ ပြောသံဆိုသံ မကြားရပါလား။ ဒီလိုများ ပြောလာလို့ကတော့ ထိုင်း/မလေး အစိုးရက အမှုန့်တောင် ကြိတ်ပစ်လိုက်မယ်။ ))”
Why you are so confident on ther gourvenmet ?
Why those gourvement can do such things and why not myanmar gourvement?
Is that any different ?
ရခိုင် ပဋိပက္ခ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အလွှာစုံရဲ့ အမြင်ပါ …
So far, everything is working for my advantage.
Government should control properly,
1) Put special force or police the Rakhine State especially critical areas
2) Locate area by area with police who are trained properly with full equipment
3) Provide good communications for each area, phone, walking talking, etc..,
4) Ensure easy and faster transportation or built new road if need to reach crisis areas within minutes.
5) Take action every persons who are creating problems
6) Let every body know the situation openly
စစ်တပ်ဘဲအားမကိုးနဲ့အုံးသေမဲ့အရေး၊ငတ်မဲ့အရေးတပ်ဘဲခိုင်းနေဒါဘဲ-ဟိုလို လုပ်ပါလား … ဒီလို လုပ်ပါလား …လူတွေလုပ်ကြပါ—–စောင့်ကြည့်နေပါတယ်
အဓိကကတော့ အမှန်တရားကို မဖော်ထုတ်ချင်တာ …. မဖော်ထုတ်ရဲတာပါပဲ … ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးက နယ်မြေခွဲထွက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး…ကျုပ်တို့နဲ့အတူချစ်ချစ်ခင်ခင်နေချင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲ…သူတို့ရဲ့ရပ်တည်နေရမှုအတွက် တရားမျှတမှုကိုသာ သူတို့တောင်းဆိုနေကြတာလို့မြင်ပါတယ် … သူတို့အဆက်မပြတ်ပြောနေကြတာက သူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးနေလာကြတဲ့ ဒေသခံတွေပါ … တိုင်းရင်းသားတွေပါလို့ … အထောက်အထားတွေနဲ့ သက်သေပြနေကြပါတယ် … အဲဒါတွေဟာ ဟုတ်ပါတယ် မှန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာ ကျနော်မဆွေးနွေးလိုပါဘူး …ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ထင်တယ် … ပကတိအရှိအမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာကို … စီမံဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ် … သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရပ်တည်မှုအတွက် မမျှတတဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ .. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေမယ် … အစွဲတွေပေါ်ပေါက်လာအောင် ဒါဒမှိုင်းတိုက်နေကြဦးမယ် ….အမှန်တရားကိုဖော်ထုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုပဲ … ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးအစွဲ ဘာသာရေးအစွဲတွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ပြီးတော့ တစ်ဖက်သတ် ဘူးခံပြီးခရီးဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ …. ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ပဲ ကိုယ်ချင်းစာနာကြည့်လိုက်ပါ …. …. အဓိက ကတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်း မေတ္တာမထားနိုင်ကြသေးတာပါပဲ … လူသားအချင်းချင်း မေတ္တာထားလာနိုင်ကြတဲ့တစ်နေ့မှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ပဋိပက္ခတွေ အဖြစ်ဆိုးတွေကွယ်ပျောက်ပြီး အေးချမ်းသာယာလာမှာ မလွဲပါပဲ…
အစိုးရကိုင်တွယ်မှုကအားနည်းနေသေးတာတော့အမှန်ပဲ … ကျွန်တော်တို့ လူတိုင်းမပြောနေကြသလိုပဲ အစိုးရမကောင်းဘူးပေါ့ … လင်ကွန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျ (ပြည်သူလူထုသည် မိမိနှင့်တန်သောအစိုးရသာရသည်တဲ့) ခု ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အားနည်းနေတယ်လို့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုသည်လဲ အားနည်းနေတာအမှန်ပဲ … ဒီလိုအားနည်းတဲ့ အစိုးရမျိုးမရှိဖို့ အားကောင်းတဲ့ ၊ အခြေခိုင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် … ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီနဲ့ ပြဿနာတက်နေသလို ကချင်မှာလဲ စစ်တပ်နဲ့ ပစ်ခတတ်နေ တာကိုလူတွေမမေ့ဖို့ လိုတယ် ဥပမာ – သမ္မတ (ကြီး- အသက်ကြီးလို့လားတော့မသိ) အားထောက်ခံပါတယ်ဆိုသော သူတွေ ဘာအတွက်ထောက်ခံလဲ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာ ပြီး သေသေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ် … ဟိုလလူမကောင်းဘူး ဒီလူမကောင်းဘူးဆိုတာတွေထက် ကိုယ်ကိုတိုင်မကောင်းတာတွေကို ပြင်ဆင်နိူင်မယ်ဆို ရခိုင် မှာ ခုဖြစ်နေတာတွေ နောင်များမှာ ထပ်ဖြစ်လာစရာမရှိလောက်ပါဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်
သူတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဟာ ရွှေ့ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ပဲထားပါဦး …နောက်မှ ဒီမြေဒီရေမှာ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မရခြင်းဟာ .. နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြသနာတွေရဲ့အခြေခံကျဆုံးအကြောင်းအရာပါပဲ…မ.ဆလ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကတည်း ပြဌာန်းထားခဲ့..ဒီ (၁၉၈၂)ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေဟာ ကမ္ဘာကလက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနဲ့မညီတော့မှန်းသိလျှက်နဲ့… ယနေ့အထိပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဟာ ရိုးသားမှုမရှိဆုံးနဲ့… ပြသနာတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပဲလို့ထင်ပါတယ် …
မှန်ပါတယ် …ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး ပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နေရာရလာရင် ဒီပြသနာတွေ ငြိမ်းအေးပြီး အေးချမ်းသာယာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်လာမှာပါ … အခုဖြစ်တဲ့ပြသနာကလည်း …. မရိုးသားတဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ …
ရခိုင်ပြည်နယ်က အုပ်စုချင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများအထိ အခုလိုဖြစ်ပွားလာရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းကတော့ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမည်းသုတ်ကာ ခွဲခြားဆက်ဆံ အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ် …. အလွန်ဆိုးရွားလှတဲ့ “မဆလ” တစ်ပါတီအာဏာရှင်ခေတ်တွင်ပင် ယခုကဲ့သို ခွဲခြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ လူကြီးပီသစွာကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့သဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ မည်သည့်ပြသနာမျှပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် စစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့(၁၉၈၂)ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေကိုအခြေခံပြီး ဖိနှိပ်ခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့ကိုပိုမိုပြုလုပ်လာတာကို သတိပြုမိပါတယ် …. ရလာဒ်အဖြစ်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတို့ အတွင်းအတွေးအခေါ်များ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်…ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြသနာ စတင်ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင်လည်း… တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ခွဲခြား၍တရားစီရင်မှုကိုပြုခဲ့သည်…တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကို အချိ န်နှင့်တစ်ပြေးညီဖော်ထုပ်အရေးယူမှုမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာအောင်အားပေးအားမြှောက်ပြု ခဲ့ပြန်ပါတယ်…အဓိက ကတော့ အစိုးရကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေး ရောထွေးပြီးစီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ခြင်း …အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမည်းသုပ်ပေးနေခဲ့ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်… . …နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေး ကိုသီးခြားဆောင်ရွက်မှသာလျှင် ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် …. နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘာသာရေးမလုပ်ရဘူးလို့ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါ … နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘာသာရေးလုပ်တာကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြနေတာကြောင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာ အတွေးအခေါ်တွေပြောင်းလဲပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ အခုလိုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ် … အဓိကကတော့ အစိုးရပါပဲ
…တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုတာဟာ မရိုးသားတာပါပဲ…..တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိနေတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ မဖြစ်ပွားနိုင်ပါဘူး …. ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မှာပါ နောင်အချိန်မှာ လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေက စနစ်တကျဆန်းစစ်လာတဲ့အခါမှာ လက်သည်တရားခံ မည်သူလဲဆိုတာဟာ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာမှာပါ … အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဆင့်မရှိ ဆဲရေးတိုင်းထွာပြုလုပ်နေရုံနဲ့ ပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်ကတော့ မတွေးတတ် မခေါ်တတ် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောတတ်ဘူး။ စကားပြောဖို့နေရာသတ်မှတ်ထားတယ်။ သူများတွေပြောနေတာလည်းမြင်ရတယ် ဆိုတော့ ရင်ထဲရှိတာလေး ၀င်ပြောခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကတိတည်ပါစေ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို သစ္စာမဖောက်ပါနဲ့ လို့။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခအတွက် သမ္မတကြီးရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကလဲ တစ်ခုပြီး တစ်ခု …..ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ကျနေတာဘဲဗျာ
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကလဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ
ဒီမှာ ချောက်ထဲကျဖို့ လက်တစ်လုံးဘဲ လိုပါတော့တယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ဘယ်လိုစတင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပဋ္ဌမဦးစွာမဒိမ်း မှု ၊ပြီတော့တောင်ကုတ် လူသတ်မှု။ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ၊ ဘာသာရေးပုတ်ခတ်မှု၊ ဘာသာရေးအစွန်း ရောက်မှု၊ ဒါတွေဟာ ချက်ခြင်းကြီးဖြစ်ပွါးသွားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်၊ တမင်ရည် ရွယ်ပြီအစီစဉ်နဲ့ အတိအကျပြုလုပ်ခဲ့တာပါဘဲ ၊နောက်တချက်ကရိုဟင်ဂျာကို ဘင်ဂါလီအဖြစ် ပြောင်းပြီးဘင်ဂလားသေ့စ်ကနေခိုးဝင်လာသူတွေလို့ဆိုပြန်တယ်၊ စဉ်စားရမှာက ၄ ၅ ၁၀ နှစ် အတွင်းရောက်လာတဲ့သူတွေလား? နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူလား?။ မျိုးဆက်ဟောင်းတွေက မရှိတော့ပါဘူး မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာဘဲမွေးဖွါးတဲ့ အတွက်နိုင်ငံသား မှန်ကန်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလဲဘဲ နိုင်ငံသားမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေး သင့်ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားဆိုတိုင်း နိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘင်းဂလားသေ့စ်ကနေ ခိုးဝင်လာ ပြီးနိုင်ငံသား ခံယူထားကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေ အများအပြားရှိကြပါတယ်။ ဒါကနိုင်ငံသားနဲ့တိုင်း ရင်းသားခွဲခြားမှုပါ။ OIC နဲ့ပါတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မွစ်္စလင်တွေကို တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်၊ တနိုင်ငံလုံးOIC ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်၊ သံဃာတော်တွေက ဦးဆောင်ပြီဆန္ဒပြပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်၊ အ မှန်တကယ် အစိုးရပြုလုပ်သင့်တာက OIC ကို လက်လခံခဲ့တဲ့အချိန်ကသေချာ စီစစ်ပြီးလက်ခံ သင့်တယ်၊ AZGအဖွဲ့ကိုလဲ နားလယ်သင့်ပါတယ်၊ သံဃာတော်တွေ အော်တာနဲ့ပြည်သူလူထုတရပ်လံုး မလိုလားလို့ဆိုပြီး ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်၊ ထားပါတော့ကနေ့ဒုက္ခသယ်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ် တဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ ဆေးဝါးကုသရေးကို အစိုးရဘယ်လောက်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်သလဲ၊ နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ၊ စဉ်စားစဉ်ခြင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ် မြန်မာပြည်တွင်မှာလဲ ပညာရှင် အများအပြားရှိပါတယ်၊ (၈၈ မျိုးဆက်နံမယ်ခံယူပြီ တဘက်သတ်လိုက်နေတဲ့ ကိုကိုကြီးတို့လို လူကို ပညာရှင်မခေါ်ပါဘူး) အားလုံးနဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ဘယ်သူ့ကိုပိတ်ပင်သင့်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကို မောင်းထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ နေနဲလဲ ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံး ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ စဉ်းစားပေးပြီးရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေ မဲ့ရန်းကားနေသူများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ နောက်ကွယ်ကနေကြိုးကိုင်သူများကို ဖေါ်ထုတ်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါဘဲ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေချင် ပါတယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းကဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေအဖွဲ့စည်းအတွင်းကဖြစ်စေ ပါဝင်နေပါကလဲမှန် မှန်ကန်ကန်နဲ့အရေးယူစေလိုပါတယ်
အမျိုးသားရေးဆိုတာလွန်စွာနားထောင်လို့ ကေါင်းတဲ့စကါးလုံးတစ်ခုပါ၊ ဒါကိုလူလည်တွေကကေါင်းကေါင်းသိတယ်၊
ဘာလာလာဒီတင်းပုတ်ကြီးနဲ့ ထုတော့တာပဲ၊ အတ္တ၊မာန၊လူမျိုးစွဲ၊ဘာသာစွဲတွေဖယ်ပြီးလူကိုလူလိုမြင်ကြည့် ပါ၊
သူတို့ အားလုံးဟာခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ လို
ငိုတတ်ရီတတ် နာကျင်တတ် ခံစားတတ်သူတွေပဲ၊
တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲ အထီးကျန်တဲ့ အထိ
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ပိတ်ထားတဲ့
ရခိုင်တွေ တောင်းတာမှန်ပါတယ်။ သူတို့က သူတို့မြေကို သူတို့ကာကွယ်နေကြတာပါ။ မူဆလင် ဆိုတာကိုမေ့လိုက်ပါ။ ဒီလူတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာပဲစဉ်းစား ရမှာပါ။ မန္တလေးသားတွေလည်း တရုတ်တွေကို မုန်းပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာလည်း ရှမ်းတွေက တရုတ်တွေကို မုန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နေတုံးပါပဲ။ ကြည်ဖြူလို့ မဟုတ်ပါဘူး စစ်တပ်က လူကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလောက ထဲက ထွက်သွားမှ သည် အထိ စောင့်နေတာပါ။ ရခိုင်တွေ စိတ်ရှည်ပြီး စောင့်နိုင်ပါစေလို့။
အခုဖြစ်နေတဲ့ ၇ခိုင်အေ၇းကို မြန်မြန်ပြေလည်ပြီး ပြည်သူတွေကျေနပ်နိုင်မယ့်နည်းကတော့ လက်၇ှိဖြစ်နေတာတွေကို သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲအစည်းကို သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ လူမှန်နေရာမှန်တာဝန်ပေးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ေ၇ာက်ထိန်းသိမ်းစေချင်တယ်။ပြီးရင် ၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မှာပါတဲ့ နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေ အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ကစပြီး နိုင်ငံသားခံယူမှု့စိစစ်ရေးကဒ်ပြားတွေကို တရားဝင်ပြန်စိစစ်သင့်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ရောထွေးနေတဲ့ နိုင်ငံသားခံယူမှု့ ပြသနာနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့၂ဘက်တင်းမာမှု့ တွေ ဖြေ၇ှင်းရာမှာ အဖြူအမဲကွဲသွားမှာပါ။ဒီလိုဆို ရင် အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကိုဖြေ၇ှင်းရာမှာကြိုးတစ်စ ထွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လူမျိုးတိုင်းမှာတော့ဘယ်လောက်ပဲ အချင်းချင်း မပြေလည်နေကြပါစေ လူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ လက်သည်းဆိတ်တော့ လက်ထိပ်တော့နာကြရတာပါပဲ ဒါကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာက နားလည်းနိုင်ကြမှာပါ….နားမလည်ပေးနိုင်ကြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေ ကံဆိုးတယ်ပဲမှတ်ကမှာပေါ့ဗျာ။
Rohingars have been Living in northern Rakhine since many centuries ago. The Leaders of Rakhine should negotiated with Rohingars’ Leaders under the Law of country.
No Law No Peace
ဗုဓ ဟိဒူ. ခရစ်ယန်. မူဆလင်. ဘာသာကိုးကွယ်တာပဲးကွာတယ်
ဘာမှမဟုတ်တဲ့. ရခိုင်ဘင်ဂါလိနင့် ရိုဟင်ဂျာ
ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဆွေးနွေးခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမဖြစ် ပွားဖို့နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်၊ ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိတဲ့ လုံခြုံရေးတွေချထားသင့်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေ ကိုအင်အားများများ ထောက်ပံ့မှုကောင်းကောင်းနဲ့ချထားသင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေလုံးဝမ၀င်နိုင်အောင်တားဆီးရပါမယ်။ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့နေရာ မီးကျိုးမောင်းပျက် သေနတ်အစုတ်အပြတ်တွေနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူး။ ခေတ်မီသေနတ်တွေ၊ ကိရိယာတွေနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်ထားနိုင်မှသာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ နောင်ရေးစိတ်အေးရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။